Nin iyo xaaskiisa oo ku guulaystay tartan isboorti - BBC News Somali
Nin iyo xaaskiisa oo ku guulaystay tartan isboorti
Image caption Cali iyo Nuura
Cali Farag iyo Xaaskiisa Nuura Al Tayab ayaa noqday lammaanihii ugu horeeyay adduunka oo maalin kaliya ku wada guuleysta tartanka isboorti adduunka.
Nuura ayaa 3-2 kaga badisay Raniim Al Walili tartanka kubbada xeen-daabka ee Maraykanka, halka saacado kadib ninkeeda Cali Farag uu 3-0 kaga badiyay Maxamed Al Sharbaqi.
Lampard oo ciyaaraha ka fariistay
Lammaanahan oo kasoo jeeda dalka Masar ayaa kaalmaha koowaad ka galay horyaalka dumarka iyo ragga ee kubbada xeen-daabka adduunka .
Kubbadan waxaa dheela labo qof, garoonkana waa mid xeeb daaban, waxaana lagu dhuftaa darbiga, iyada oo labada qof ee ciyaaraya ay heystaan gacanqabsi ay ku celiyaan kubbada marka ay darbiga kasoo laabato, waxaana afka qalaad lagu yiraahdaa Squash Sport.
"Markii aan dhameeyay ciyaartay , waxaan aaday tiisa si aan u daawdo, aad ayaanan u walwalsanaa, waxay ahayd riyo aan maalin kasta ka fikiri jirnay, una dadaali jirnay, aad ayaanan ugu faraxsanahay in aan maanta gaarnay heerkaas" ayay tiri Nuura.
Inkasta oo ay tahay markii koowaad taariikhda lammaane is qaba in ay markaliya, maalin kaliya, hal horyaal ku wada guuleystaan, haddane waxaa horay u jiray lamaaneyaal kale oo siyaabo kala duwan koobab ugu guulaystay.